Ny Oseana Pasifika, ny feon'ilay surf, ny masoandro mamirapiratra ary ny rivotry ny andro fialan-tsasatra, izay tsy misy toerana hikororohana sy haingana, dia miandry izay rehetra manapa-kevitra hitsidika ny saikanosy any Santa Elena. Tsy misy tora-pasika feno olona, ​​manery ny mpizahatany hikatsaka toerana any amin'ny masoandro, fa kosa mifanohitra amin'izany, be dia be, toerana fialam-boly, miala amin'ny fasika mavo ary mitarika mankany amin'ny ranomasina.
Ny Helodranomasin'i Santa Elena - loharanom-pikarohana arkeolojika
Ny nosin'i Santa Elena dia ao amin'ny provansy Ekoatera iray, any andrefan'ny firenena. Niorina vao haingana ny faritany - tamin'ny taona 2007, ka lasa iray amin'ireo zandriny indrindra tany Ekoatora . Avy amin'ny fomba fijery arkeôlôgy, malaza amin'ny tsenan'i Santa Elena ny fizaham-pireneny ao amin'ny faritaniny, noho izany dia azo atao ny mahita zavatra tsy hita maso mifandraika amin'ny kolontsain'i Amerika Atsimo. Anisan'ny fitaovana hita avy amin'ireo arkeôlôgy ireo fitaovana isan-karazany amin'ny asa, seramika sy sary sokitra izay maneho ny fanahin'ny razambe.
Ahoana ary aiza no hijanonana any amin'ny saikanosy any Santa Elena?
Ny Helodranomasin'i Santa Elena amin'izao fotoana izao dia toeram-ponenana tsy natao hialana amin'ny fialan-tsasatra sy ny filentehan'ny masoandro, fa koa toerana iray izay hananana fotoana handaminana fotoana, na dia ao anaty fialantsasatra aza. Voalohany indrindra, miresaka momba ny fanjonoana ara-panatanjahantena isika miaraka amin'ny sambo mankany amin'ny ranomasimbe misokatra, miaraka amin'ny mpitarika za-draharaha, izay vonona ny hilaza hoe aiza no ahafahan'ny mpizahatany afaka manamboatra ranomasina mipetraka. Ny vidin'ny fialamboly toy izany dia eo amin'ny 130 dolara isaky ny ora, saingy tokony ho raisina an-tsaina izany ora izany mba hankafizana ireo fanjonoana rehetra any amin'ny ranomasina misokatra - tsy ampy fotsiny. Eo amin'ny faritry ny saikanosy dia tanàna mpanjono marobe, ny mponiny dia miasa amin'ny fanjonoana fotsiny ary matetika vonona ny hitarika kilasy tokana ho an'ny mpizahatany amin'ny vidiny mora, ary koa ny mizara ny tsiambaratelon'ny trondro lehibe.
Ny surfing dia fikambanana malaza iray hafa ho an'ireo tia mpilalao fanatanjahan-tena amin'ny fialantsasatra ao amin'ny saikanosy any Santa Elena. Ny olona iray dia manatsara ny fahaizan'izy ireo, mandresy onja iray isan-karazany, ary misy olona mipetraka eo amin'ny fasika volamena, dia afaka mijery ireo matihanina amin'ny sambon'izy ireo. Ny ankamaroan'ireo mpirotsaka rehetra dia manangona eny amoron-dranomasina amin'ny anaran'ny Montanita , satria tsy misy fitsaharan'asa velively ary afaka mampihatra betsaka. Niteraka fahasamihafana ho an'ireo mpizaha-tany izay tonga nandritra ny fifaninanana nasionaly tamin'ny fiaramanidina, izay matetika no mihazona eto amin'ny fahavaratra. Manintona olona marobe ny hetsika ary miteraka hafanam-po amin'ny mpijery rehetra, izay manoloana ny fifaninanana, eo ambany fitarihan'ireo mpampianatra matihanina, dia manandrana manandrana ny tanany amin'ny familiana ny onja. Mahafinaritra koa ny tora-pasik'i Salinas , izay tsara indrindra sy azo antoka ho an'ny hilomano. Ankoatr'izany, ao amin'ny faritaniny dia misy klioban'ny jacht, izay misy olona afaka mandao ary manana fotoana tsara, nandidy baolina sy snacks teo an-toerana.
Ao amin'ny saikanosy any Santa Elena dia misy hotely sy hotely maro mifanaraka amin'ny politika samihafa, ary noho izany dia azo atao ny mahita ireo safidy ho an'ny trano fonenana sy ireo trano fonenana tsara indrindra, izay tsy misy afa-tsy ny tena ilaina. Ohatra, ny malaza indrindra amin'ny mpizaha tany:
Hotel Hostería Punta Blanca , izay manana kintana telo. Ny vidin'ny fiainana any amin'ny efitra roa dia manomboka amin'ny $ 90 isan'andro, ny sakafo maraina dia tafiditra ao amin'ny vidiny. Misy toeram-pisakafoanana ivelany, bar-barotra ary maimaim-poana ho an'ny vahiny. Misy efitra fandroana, TV ary TV.
Hotel Marvento Uno miaraka amin'ny kintana telo manome ny trano fialan-tsasatra izay mahalany vola 95 dolara isaky ny alina hanaovana trano roa. Ny sakafo maraina koa dia tafiditra ao amin'ny vidin'ny fialofana, ankoatra izay, ireo mpitsidika dia afaka mampiasa ny lakandrano eo amin'ny tafo. Azonao atao ny mandray anjara ao amin'ny maimaim-poana, ary ny ankizy ihany koa misy dobo filomanosana manokana. Fiantsenana maimaim-poana, aterineto, toeram-pisakafoanana any amin'ny efitrano - tsy lisitra feno fotsiny ny servisy omen'ny Hotel Marvento Uno.
Hotel Hotel Francisco II dia hotely 2 kintana. Ao anatin'izany, miaina ao anatin'ny efitra roa avo roa heny ny vidin'ny 80 $ isan'andro. Ireo mpitsidika dia afaka mampiasa ny serivisy maimaimpoana maimaimpoana maimaim-poana, ary ao amin'ny efitranony dia misy toetr'andro, efitra fandroana, vata fampangatsiahana ary Internet.
Ny trano fandraisam-bahiny, fa amin'ny kintana telo fotsiny ihany no handoavana $ 90 isaky ny alina hanaovana fanatobiana roa - Hotel Francisco III - manolotra efitrano malalaka amin'ny Internet sy ny fananana rehetra. Ankoatr'izany, ny hotely dia manana dobo filomanosana, maimaimpoana maimaim-poana sy manadio isan'andro.
Ny trano fandraisam-bahiny dimy kintana - Barceló Hotels & Resorts - dia miasa amin'ny fototra rehetra. Ny hotely dia manana dobo filomanosana ivelany, kabinetra fahitalavitra, klioban'ny rivotra, mini-bar ary ny zavatra rehetra ilainao hahazoana fialan-tsasatra. Misy koa fandroana sauna sy hydromassage, azonao atao ny mandalo fitsaboana maro isan-karazany, mitsidika ny toeram-pandihizana ary manamboatra kilasy Master mihitsy aza amin'ny rivodoza sy ny manidina. Ny trano fandraisam-bahiny dia manolotra ny vahiny avy amin'ny Jolay ka hatramin'ny Oktobra mba handehanana mankany an-dranomasina misokatra, miaraka amin'ny mpitarika sy ny fijerena trozona. Ny vidin'ny fiainana any amin'ny efitra roa dia tokony ho 150 dolara isan'andro.
Noho izany, mitsangatsangana ao amin'ny saikanosy Santa Elena miaraka amin'ireo fahafahana manao safidy malalaka sy fialam-boly - dia hitondra fihetseham-po maro sy fanehoana mazava.
Ahoana no hianaranao handresy?
Milanja mandritra ny fitondrana vohoka
Olona tsy manaja
Fiaviana vaovao avy amin'ny pigtails 2013
Padova - manintona
Rahoviana ny manao ultrasound tetezana?
Ny tsy fahombiazan'ny hormona amin'ny vehivavy - fitsaboana, zava-mahadomelina
Ahoana ny fomba hisasana sakafo ara-dalàna?
Fiovan 'ny Tompo - famantarana, fombafomba
Sorrel - toetra mahasoa
Voahangy voanio miaraka amin'ny zezika sy zana-maitso
"Decis" - torolàlana ampiasaina
Salady misy karana sy croutons
Brucellose - soritr'aretina
Benefits amin'ny serealy
Komity misahana ny ray aman-dreny ao amin'ny efitrano fianarana